Nepal - Kaalmo Helitaan Caalami ah
EAI waxay ku faraxsan tahay inay ka shaqaysay dalka Nepal 20 sano.
Waqtigaas, waxaan soo aragnay waddanku masiibo, rabshado, iyo xasillooni darro. Waxaan sidoo kale aragnay inay kobcayaan oo korayaan, horeyna ugu soconay rajo iyo adkeysi si loo sameeyo jamhuuriyad dimuqraadi ah oo federaal ah Dhamaanteed, waxaan sii wadeynaa inaan si adag ula shaqeyno shaqaalaheena reer Nepali si aan u dhisno wadan xasiloon oo xasiloon.
Soosaarista taxane badan oo guuleysta oo raadiyaal ah oo ku saleysan qaabkeenna wada xiriirka is-beddelka bulshada iyo dabeecadda, waxaan sameynay cabbir, saameyn wax ku ool ah nolosha ragga, haweenka, iyo qoysaska. Mashruuca ugu horreeyay ee EAI sanadkii 2000 waxaa laga bilaabay dalka Nepal. Ilaa iyo markaa, waxaan soo saarnay taxane guulo badan oo abaal marin ah, oo ku yaal dalka Nepali iyo luqadaha kale ee maxalliga ah ee Nepal.
Barnaamijkeena barnaamij ee ka socda dalka Nepal wuxuu salka ku hayaa qaabkeena isbadalka hab dhaqankeena iyo dhaqankeena kaas oo awood siiya dhagaystayaasha isla markaana kiciya ficil iyada oo loo marayo kaqeybgal bulshada sare iyo abaabul awoodeed. Waxaan si gaar ah ugu guuleysanay shaqada isbedelka caadiga ah iyadoo la adeegsanayo hannaankeena saxeexa si aan wax uga qabanno arrimaha sinnaan la'aanta ee salka ku haysa caadooyinka hiddaha iyo dhaqanka.
Sanadihii aan shaqeyneynay ee Nepal wuxuu noo suurta geliyey inaan hagaajino qaabkeenna ku saleysan bulshada ee saameynta bulshada, oo aan si buuxda ugu dhexgalno bulshada barnaamijyadayada sida wariyeyaasha, baarayaasha, iyo fududeeyeyaasha. EAI ee dalka Nepal waxaa hogaaminaya koox khibrad u leh shaqaalaha maxalliga ah oo u heellan hirgelinta saameyn aad u sarreysa, barnaamijyo sanado badan ah oo ku saabsan aagag kaladuwan oo ay ka mid yihiin kaqeybgalka bulshada, sinnaanta jinsiga, awoodsiinta dhalinyarada, IPV iyo ka faa'iideysiga galmada ee carruurta aan qaan-gaarin.
Iyada oo qayb ka ah u heelnaanta dhaqannada cilmi-baarista adag, waxaan si iskaashi leh ula shaqeynay hay'adaha waxbarashada, oo ay ku jiraan Jaamacadda Tiknolojiyadda Queensland iyo Jaamacadda Emory. Dhowaan waxaan la soconay Iskuulka Rollins ee Caafimaadka Dadweynaha, oo ku saleysan Emory, waxaan ku soconay tijaabooyin kooxeed nidaamsan oo la xakameynayo mid ka mid ah wax ka qabadkeena caadooyinka bulshada ee loogu talagalay in looga hortago rabshadaha ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha. Daraasad dheeri ah, oo ay maalgaliso deeqda hal abuurka ah ee Baanka Adduunka, ayaa tijaabin doonta saamaynta shaqadeenu ku yeelanayso kala-qaadidda caadooyinka.
Si aad u aragto qaar ka mid ah ololayaashayaga internetka, fadlan booqo YouTube channel!
Aqoonsiga in gabdhaha ka shaqeeya qaybta madadaalada dadka waaweyn ee Kathmandu ay qatar ku yihiin dhiig-miirashada galmada, EAI waxay fulisay hawshan firfircoon ee SBCC iyada oo loo sii marinayo warbaahinta bulshada.
Nepal: Ololaha 18minus
EAI ayaa bilaabay Sahi Ho! olole si kor loogu qaado wacyiga, loo kordhiyo rabitaanka siyaasadeed, iyo in lagu dhiirrigeliyo ilo badan oo lagu taageerayo doorarka hoggaaminta haweenka iyo xoojinta dhaqaalaha ee Nepal. 2018-xaadir
Nepal: Sahi Ho! Ololaha u-ololeynta haweenka iyo sinnaanta jinsiga
Nepal, EAI waxay ka caawisaa haweeney inay noqoto u olole ka dhan ah rabshadaha ku saleysan jinsiga
Hadda waxyaabihii way is beddeleen si ka wanaagsan sidii hore. Geeta waxay xaqiijisay inay hada tahay wariye diirada saara rabshadaha qoyska.
U fiirsashada aalkolada inay tahay mid dardar galisa rabshadaha lamaanaha, taas oo ku saleysan xogta laga helay mashruuceena isbeddelka ee ka bilaabmaya guriga ee Nepal
Nepal, Horyaalnimada Sinnaanta Jinsiga & Awoodsiinta Haweenka
Imtixaan Tayo leh oo Adeegsiga Aalkolada iyo IPV ee lammaanayaasha Nepali ee ka hortagga Rabshadaha Kahortagga
Markii ugu horreysay waxaa lagu daabacay Caafimaadka Haweenka BMC Janaayo 28, 2019
Hababka isku dhafan Qiimaynta Khatarta Haweenka ee Rabshadaha Wadajirka ah ee ka socda Nepal
Aaway hudheelka caanka ah ee Manarupa?
Ku saabsan Qoraaga: Binu Subedi wuxuu ka shaqeeyaa EAI ee Nepal. Waxay tahay soo saare iyo qoraa barnaamijka raadiyaha Samajhdari, iyo waliba codka Manarupa ee riwaayadda.
EAI waxay fududeyneysaa isbeddelka caadooyinka isbedelka ee Nepal oo leh naqshad barnaamijyo abaalmarin ah - naga taageer sidii aan u dabooli lahayn dadaalkeena.